Sary fampiroboroboana voalohany an'ny Xperia Z5 Compact | Androidsis
Sary fampiroboroboana voalohany an'ny Xperia Z5 Compact
Sony dia iray amin'ireo mpanamboatra fitaovana teknolojia lehibe, anisany mampiavaka ny findainy marani-tsaina. Ny orinasa dia nanangana fantsona maro tena tsara amin'ny lafiny famaritana sy famolavolana, na dia amin'ity teboka farany ity aza, ny orinasan-tserasera Tokyo dia namerina namolavola ny famolavolana ny terminal-ny tao anatin'ny elanelam-potoana samihafa, ka nahatonga azy tsy ampy fanavaozana tamin'io fotoana irian'ny mpampiasa maro.
Na izany aza, efa tena nahavita be i Sony hatreto, amidy ny terminal, malaza izy ireo ary izy ireo no tsara indrindra azontsika jerena amin'ny tsena Android. Ny laharana voalohany sy malaza indrindra dia ny laharana Xperia Z, izay hahazo mpanofa vaovao ao anatin'ny volana vitsivitsy izay ho lasa havan'ity mpanamboatra malaza ity, ny Xperia Z5.
Nandritra ny herinandro lasa izay dia nahita vinavina betsaka momba ny terminal Sony ho avy isika ary antenaina fa hisy amin'ny karazany roa: Xperia Z5 sy Xperia Z5 Compact. Io maodely farany io indrindra no horesahintsika anio. Ho fanampin'ireto terminal ireto dia misy ihany koa ny mety hisian'ny variant misy habe efijery lehibe kokoa momba ireo maodely hafa, dia ny Xperia Z5 Ultra,
Ny vavahady Techtastic dia nanome ny sary fampiroboroboana voalohany an'ny terminal Sony manaraka. Ny tsaho momba ity fitaovana ity dia milaza fa hanana ny terminal Efijery 4,7 inch miaraka amin'ny famahana ny 1280 x 720 teboka. Ao anatiny no ahitantsika mpanam-bokatra misy maritrano 64-bit ary novokarin'i Qualcomm, ny Snapdragon 810 ary miaraka amin'ity SoC, ny Xperia Z5 Compact, dia hipetraka 3 GB Fahatsiarovana RAM.
Anisan'ireo fepetra manokana tsy dia manandanja loatra, hitantsika ny fomba fampitaovana ny fakantsary amin'ny fakantsary lehibe 21 Megapixels miaraka amina sensor vaovao, miorina ao ambadiky ny fitaovana, hanananao sensor sensor eo amin'ny ilany ankavanan'ny fitaovana ary hihazakazaka eo ambanin'ny andiany farany an'ny Android, angamba eo ambanin'ny MarshMallow, na dia azo aseho eo ambanin'ny Android 5.1.1 Lollipop ary avy eo havaozina amin'ny alàlan'ny OTA terminal.
Amin'izao fotoana izao dia tsy manana fampahalalana bebe kokoa momba ny terminal japoney ho avy isika, saingy afaka nanolotra an'ity fitaovana vaovao ity i Sony mandritra ny fankalazana ny tsena teknolojia farany lehibe, ny IFA any Berlin, izay hatao ny herinandro voalohan'ny volana septambra, noho izany isika mitandrina ny zava-mitranga mandritra ny foara mba hahafahana mampahafantatra momba ny hetsika manaraka ataon'ity mpamokatra aziatika malaza ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Sary fampiroboroboana voalohany an'ny Xperia Z5 Compact
Julderth Alberto dia hoy izy:
Maninona i Sony no tsy manitatra ny fahatsiarovana, ireo teboka, ireo mpikirakira izay hovelariny
Valiny tamin'i Julderth Alberto
Hampahatsiahy anao ny sary nalainanao taloha ny Google Photos